wow!! beautiful snows.
အဟဲ ဆားအကြီးအကျယ်ချက် နေတယ်… မပန်။
ဟား… ဆားတွေ အပြိုင်အဆိုင် ချက်နေကြတာ ဂန္ဒီကြီးဦးဆောင်ပြီး အာဏာဖီဆန်နေသလား မှတ်ရတယ်၊ (ဘာမှမလည်း မဆိုင်ဘူး… :D)
ပုံရိပ်ရေ… ဘာသာပြန်ထဲက နောက်ဆုံး အာလုပ်စကားကို အကြိုက်ဆုံးပဲ… =))
မောင်တက်>> Wow!! ဆိုပါလား။ အဲ တကယ် ကောင်းလို့လားဟ။။ ကိုယ့်ဘာသာတောင် ပြန်လန့်သွားတယ်။ ကလူကလူ။
ပုံရိပ် >> အာဟာ အာဟာ.. တယ်ဟုတ်ပါလားကွာ..
ကိုပု >> ဟင်.. ဘာသာတော့ ပြန်မသွားဘူး.. အင်းပေါ့လေ စာတည်စာခန့်တွေပဲ ဘာသာပြန်တယ်ဆိုတော့ ပန်ဒိုရာတို့ ကဗျာနုပ်စုပ်ဂုတ်စုပ်ကလေးကို ပြန်ချင်ဘူးပေါ့.. အိအိအိ..
ပီတိ >> အချစ်ဆိုတာ ဘယ်ကပါလာလဲ.. ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ယူဆတာ။ တာဝန်ယူဘူးနော်။ ဟဲဟဲ
ခရီရေတာ >> နာ့မောင်လေး တော်ပါပေတယ်.. ဟဲဟဲ
မပန်ရေ… ကဗျာကို ဘာသာမပြန်တာက မပြန်တတ်လို့… :D ပြီးတော့ မပုံရိပ်ပြန်သွားတာ ပြည့်စုံပြီထင်လို့… :D
ကိုယ်ပြန်တာ ကိုယ်မကြိုက်လို့ ထပ်ပြန်ကြည့်မယ်နော် ... ဟဲဟဲ .. ဒီတခါ ဟိုက်ကူလိုလို ဘာလိုလို ဟုတ်တော့ပဲနဲ့ ခရီရေတာ စတိုင်လေးနဲ့ပေါ့ ..
ပြန်ပြီးတော့လဲ သိပ်ကောင်းတယ် မထင်ဘူး။ မူရင်းကဗျာကို မှီဘူးဗျ ... :( ...
ကိုပု >> ရှိပါစေတော့ လေ.. ဟင်းဟင်း
ခရီရေတာ >> ကောင်းပါတယ်ဟ.. ကိုယ်စဉ်းစားထားတာနဲ့ ပိုနီးစပ်သွားတယ်
Thank you soalot!! It's very good ~